एजेन्सी । विश्वका अन्य देशमा झैँ नेपालमा पनि मोबाइलको प्रयोग सर्वब्यापी बन्दै गएकाे छ। आजकल यति सम्म भइसकेको छ कि, मोबाइल बिना एकछिन पनि मान्छे रहन नसक्ने भइसकेको छ।
अन्य मुलुक झैँ नेपालमा प्रचुर सम्भावना भएकाले नै मोबाइलका नयाँ-नयाँ ब्राण्ड भित्रिरहेका छन् । स्मार्टफोनको बजारमा विश्व बजारमै देखिएको तीव्र प्रतिस्पर्धा नेपाली बजारमा पनि कम रोचक छैन ।
स्मार्टफोनले वर्षेनी देशको ठुलो रकम विदेशिने गर्दछ । महंगा सेटहरुमा नेपाली उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दा आयात दर उकालो लागिरहेको छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा मिड रेन्ज बजेट मोबाइलको प्रयोग सबैभन्दा उच्च गतिमा बढिरहेको छ ।
यहि स्मार्टफोनको अत्यधिक प्रयोग हुन थालेपछि भिटामिन वाटर नामको एक कम्पनीले हालै एक प्रतिस्पर्धाको आयोजना गरेको छ । यो प्रतिस्पर्धामा भाग लिने व्यक्तिले एक वर्षसम्म आफ्नो मोबाइल फोन वा ट्याबलेट चलाउन पाउने छैनन् । अहिलेको जमानामा यो सायदै सम्भव होला तर कोकाकोलाको स्वामित्वमा रहेको यो कम्पनीले यसो गर्नेलाई एक लाख डलर ( एक करोड १४ लाख रुपैयाँ) नगद उपहारको घोषणा गरेको छ ।
प्रतियोगीले स्मार्टफोन प्रयोग गरेको छ छैन भनेर कसरी पत्ता लगाउला भनेर सोचिराख्नुभएको होला । यसबारे पूर्ण नियम सार्वजनिक भइसकेको छैन तर कम्पनीका अनुसार पुरस्कार प्रदान गर्नुअघि प्रतियोगीले पोलिग्राफ टेस्टको सामना गर्नुपर्ने बताएको छ । – न्युज२४नेपालबाट
यी हुन मर्नुभन्दा पहिले नछुटाई हेर्नु पर्ने रोमान्टिक १० फिल्महरु !
मानिसले फरक फरक तरिकाले मनोरंजन लिने गर्दछन् | कोहि घुम्न मन पराउछन् त कोहि सिनेमा हेर्न कोहि चित्र कोर्न सबैले आफ्नै आफ्नै तरिकाले रमाउने गरेको पाइन्छ | संसारमा मनोरन्जन कै निम्ति यस्तो फिल्म पनि बनेका छन्, जुन अरुभन्दा बिल्कुलै फरक छन् |
तपाइको जीवनकालमा यी १० फिल्महरु हेर्न कसैगरी नछुटाउनुहोला !
१ टाइटनिक,सन् १९९७
२ अ वाल्क टु रिमेम्बर,सन् २००२
३ द नोटबुक,सन् २००४
४ फाइभ हन्ड्रेड डेज अफ समर,सन् २००९
५ बिस्ट्ली,सन् २०११
६ रिमेम्बर मी,सन् २०१०
७ ब्लु भ्यालेन्टाइन,सन् २०१०
८ माई स्यास्सी गर्ल,सन् २००८
९ हाउ टु लुज अ गाय इन टेन डेज,सन् २००३
१० लिप एयर,सन् २०१०
प्रेमी जेरेमीलाई पर्पोज गर्न बोस्टनबाट डब्लिन यात्रा गर्छिन् । तर यात्राका क्रममा विभिन्न अवरोध आउँछ । तैपनि हार मान्ने त कुरै भएन । निर्देशक आनन्द टुकरले मायालाई उत्सवका रूपमा मनाउन एउटा केटीले लिएको चुनौतीलाई निकै रमाइलो शैलीमा पर्दामा बुनेका छन् ।